Tarisa OS haigare ichitora pulse yega yega 10m kana ukafamba | IPhone nhau
Tarisa OS 1.0.1 ichaedza kusevha mabhatani ako nguva dzese gumi, asi hazviite kana ruoko ruchifamba
Apo iyo Apple Watch yakashandisa iyo vhezheni 1.0 yeWatch OS yakachengeta kupomba kwevashandisi maminetsi gumi. Kubva kuburitswa kweWatch OS 1.0.1, vashandisi vaona kuti data harisisina kuchengetwa nguva dzose, dzimwe nguva ichave isina kunyoresa chiyero kweinenge awa, iyo kubva pakutanga yanga ichifungidzirwa kuti iguru mune yazvino vhezheni yeApple Watch inoshanda sisitimu.
Maererano ne yakagadziridzwa peji nezvekuyera kupomba kwedu, "Iyo Apple Watch ichaedza kuyera moyo wako roja maminetsi gumi, asi haizoirekodi kana uchifambisa kana kufambisa ruoko". Iyo yekutanga vhezheni yeWatch OS haina kufunga nezve chero rudzi rwekufamba uye iyo yekusa chengetedza chiyero chemwoyo sezvayakamboita zvakakonzera kunyunyuta kubva kuvashandisi vazhinji. Kunzwa kwakawanda ndekwekuti chishandiso chakarasa basa mune yekuvandudza.
Hazvizivikanwe kuti nei Apple yaunza iyi shanduko mune hunhu mune yayo smartwatch, shanduko inoita senge kusabatika kwete shanduko yesystem inodzora kupomba kwedu. Kune vanhu vanofunga izvozvo shanduko iyi yakaitwa kudzikisa bhatiri kushandiswa, asi chirevo ichi hachina kunge chichifarirwa nemunhu chero upi zvake, nekuti hapana akaona kucherechedzwa kwekushandisa zvakanyanya pazvaiyerwa nguva dzese maminetsi gumi.
Mhinduro yakawanikwa nenharaunda kudambudziko iri kutanga kudzidzira kumanikidza kuyerwa kweiyo kurova kwemoyo, iyo inozoponesa kupomba kwedu mumasekondi gumi ese. Dambudziko hombe nderekuti vashandisi vanofanirwa kurangarira kuita manyore maitiro aya kana, kana yakajairika system yakashanda sepakutanga, hatifanire kuzviitira chero chinhu. Kune rimwe divi, iko kudyiwa kwavanofungidzirwa kuti vakaedza kudzora kwaizokanganiswa nekuyera moyo yedu masekondi gumi pane maminetsi gumi, zvine musoro.
Kubva pakuona kwangu, Apple inofanirwa kuwedzera sarudzo yekutarisa OS kuitira kuti vashandisi vagone kusarudza kana mabhatani akachengetedzwa ese X maminetsi kana kwete, pamwe nekuratidza kuti inofanirwa kuyera kangani. Izvo zvaizotipa zvishoma zvebasa, asi iwe unogona nguva dzose kuva nazvo sezvazvaive muWatch OS 1.0 nekukasira uye, kana isu tikazoona kuti bhatiri rinodya nekukurumidza kupfuura isu zvatingade, isu tinogona kurigadzirisa pamadiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Tarisa OS 1.0.1 ichaedza kusevha mabhatani ako nguva dzese gumi, asi hazviite kana ruoko ruchifamba
Ndosaka ndichifarira yangu Fitbit HR
Pindura kuna Surce
Ngatione kana ndanzwisisa, kana iwe ukafambisa ruoko rwako harukuyese nekuti hazvina kujeka, asi kana ukamhanya zvinoita muyero unopfuurira ...? Apple chete ndiyo inokwanisa kuita kuti vateveri vayo vatende tsananguro dzayo
Masikati akanaka, Rober. Hazvina kunyatsoita saizvozvo. Zvese zvinoenderana nezvinotaurwa neApple uye sekuzvinzwisisa kwandinoita, iyo Apple Watch inoyera yako pulse yega yega 10m kana uchinge wazorora. Hazvireve kuti haigone kuyera kana iri kufamba, asi kuti haizozviyera zvayakangoita sepakutanga. Sekutsanangura kwandakaita muchinyorwa, izvi zvinoita kunge zvisiri kwandiri uye ndinofunga vachazvigadzirisa mushanduro dzeramangwana.
Mooverang, chirongwa chekuchengetedza uye kudzora zvaunoshandisa kubva ku iPhone